2014 Yesu Wu Nkaedi
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Guarani Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Krio Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Maltese Maya Mongolian Moore Nepali Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Ukrainian Umbundu Venda Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
ASƐM A ƐDA SO | NEA ONYANKOPƆN AYƐ AMA WO
Dwumadi Yi De, Woankɔ Bi a Enye
Anadwo a Yesu rebewu no, ɔka kyerɛɛ n’asuafo anokwafo no sɛ wɔnkae afɔre a ɔrebɛbɔ no. Ɔfaa paanoo a mmɔkaw nnim ne bobesa kɔkɔɔ a esi wɔn anim no de hyehyɛɛ Awurade Adidi anaa Awurade Anwummeduan no, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ so nyɛ eyi mfa nkae me.”—Luka 22:19.
Afe biara edu da a Yesu wui no a, Yehowa Adansefo a wɔwɔ wiase nyinaa hyiam kae ne wu no. Afe 2014 mu no, Nkaedi no besi Dwoda April 14, bere a owia akɔtɔ.
Yɛsrɛ wo, bra dwumadi yi bi. Wɔbɛkyerɛ nea enti a Yesu wu no ho hia wɔ hɔ. Sikatua biara nnim. Onipa ko a ɔde nhoma yi maa wo no betumi akyerɛ wo baabi a wɔbɛyɛ Nkaedi no wɔ wo mpɔtam hɔ ne bere a wɔde bɛyɛ. Wopɛ nso a, wubetumi akɔ yɛn Wɛbsaet, jw.org. Yɛsrɛ wo, kyerɛw da a wɔde bɛyɛ dwumadi no to baabi na akae wo; yegye di sɛ wobɛkɔ bi.
Yesu Wu Nkaedi
Afe biara nnipa mpempem pii hyiam kae Yesu wu no. Yɛto nsa frɛ wo sɛ bra bɛhwɛ sɛnea ne wu no fa wo ho.